Onjiniyela "Samsung" esikhathini esingangonyaka esedlule, wawela 3D TLC Hand ubuchwepheshe. Umphumela uhlobo olusha ngokuphelele abezindaba - TLC V-Hand, eyazuza njengefa zonke izinzuzo eziyisisekelo esasisandulele. Ngalobu buchwepheshe, SSD entsha ukushayela Samsung 850 Evo banganikeza cishe izici ezifanayo lobuchwepheshe njengoba Pro 850, kodwa ngentengo ephansi.
Lokhu hard drive kusekelwe control ubuchwepheshe obusha ngokuphelele flash inkumbulo ngakuthathu, lapho kuhlanganiswe multilayer isakhiwo 3D V-Hand futhi izakhiwo engabizi TLC. Ngenxa yalokho, inkampani kwavela umkhiqizo mass kabani amakhono sihlanganise value esihle, nokwethenjelwa kanye nokusebenza.
Ngakho, hero lokhu kubuyekezwa - Samsung Sata III 850 Evo. Ake sizame ukubona zonke izinzuzo zayo kanye nebubi, kucatshangelwa imibono lochwepheshe kanye nabasebenzisi abavamile ukubuyekezwa.
Ngisho nazo zonke emisha lenkampani, imodeli Evo 850, namanje, futhi ngezindlela ezithile, indlalifa emgqeni wangaphambilini 840 Evo. Izingxenye ezisemqoka agcwele izindawo umthengi imodeli 840, kwaba TLC-inkumbulo, TurboWrite ubuchwepheshe kanye zenkampani ukulawula inkampani chip (fur).
Entsha SSD uhla cishe nezintsha kuphela esikhundleni noboya ubudala isilawuli efanayo isebenzisa i-chip olusha MGX, wahlala ubuchwepheshe TurboWrite, kuphela isiqalo "ngcono" nendawo TLC-Hand esithathwe ngakuthathu TLC V-Hand.
Ngokwemvelo, isici ezithakazelisayo kunazo Samsung 850 Evo uchungechunge isibe inkumbulo ngakuthathu, ngokuhlanganisa TLC kanye 3D ubuchwepheshe. It kwenzeka organically kakhulu hlanganisa, bese umphumela kuba onokwethenjelwa engabizi hard drive.
Uma sikhuluma amaningi, uquketheni lowo hard drive, into yokuqala Kuhle kokusho kuyinto yesiqinisekiso oneminyaka emihlanu phezu umugqa omusha. Le nkathi ukunika inkampani iwuhlelo zayo models, ezifana 850 Pro Pro ne Extreme, okusho ukuthi sha ulindele Samsung 850 Evo isisetshenziswa akuyona okubi kakhulu ukwedlula SSD eziphambili. Ngakho-ke, singasho ngokuqiniseka ukuthi ukuthembeka imodeli entsha ngokucacile ngenhla avareji futhi 850 Evo lisondele kakhulu ingxenye ezibizayo kuka izindleko hard drive.
Cishe into Kungashiwo okufanayo mayelana nezici line high-speed. Evo lag kusuka umholi baqaphela Pro ijubane luyingxenye ezingokomfanekiso, futhi lo mehluko obonakalayo kuphela wokufundwayo imisebenzi, ngakho ngo kwansuku ukusetshenziswa ukusebenza hit azinakwa.
izici engeziwe nesofthiwe
Ngaphezu supply okuhle kwemithombo kanye nokusebenza, Samsung 850 Evo lwenteke nezinye izinkomba drive okuhle ubuso energy esisindisa module DevSleep kanye hardware cipher injini TCG Itshe Eliyigugu 2.0 ne-IEEE-1667 ajwayelekile, zingalawulwa nge isofthiwe uhlobo Idrayivu Yobhalomfihlo i standard yiluphi uhlelo lokusebenza.
Ungase futhi uqaphele ukuthi zonke okuqinile-isimo SSD "Samsung" enikeziwe omunye the best neyaziwayo Magican Umbuso (inguqulo 4.5 ngo-December 2015) ngesofthiwe Rapid 2.1 anikezwe amandla inqolobane imemori ngokungu-input bese okukhipha amaphuzu. Impendulo kusuka kubasebenzisi ngokuphindiwe waveza iyasiza futhi Ukusebenziseka software, okuyinto anemisila hard drive inkampani.
Samsung 850 Evo 120Gb isebenza nge isakhiwo eziyisishiyagalombili kanye Planar TLC V-Hand, anemisila lezi ngemoto, kuyinto 128-Gigabit core, ngakho-ke ukulungiswa capacious ngaphezulu nomthamo omkhulu, nakuba bheka nse.
Le nkampani isebenzisa ababusi mncane-ngodonga aluminium icala labo 7 mm ubude 2.5 amayintshi ngobukhulu - kuyinto nse imifanekiso 850 Flagship Pro. Umbala omnyama kuphela phambi hard drive wahlupheka brand logo kanye grey isikwele, okuyinto ekhona ngandlela-thile kuwo wonke amamodeli we nkampani.
On the ngemuva idrayivu kanzima ilebula, eveza yonke imininingwane eyisisekelo mayelana nomkhiqizo: igama, umthamo, sihloko, ibhakhodi, nenombolo ye-serial, njll
Engxenyeni engaphakathi Samsung 850 Evo ubukeka ukubukeka kakhulu engavamile. Njengoba kuyinto exakayo, kodwa ngesikhathi kuvulwa idrayivu kuyinto Ubukhulu encane ngakho we PCB ukumangala, njengoba isithakazelo kuba phambi zonke izifunda ezine. Ubukhulu ebhodini kusobala kakhulu ukuthi akwazi ukugcwalisa sonke isikhala ngaphakathi icala.
Le nkampani isebenzisa amadivayisi yayo, izinqubo zanamuhla kwezobuchwepheshe ukuthi asikho isidingo pads thermally conductive noma ngezinye izindlela, okuyinto osenyameni yokushisa okuvela ibhodi wesifunda phezu idrayivu kanzima. Ungabi onjiniyela igobolondo nokukhulisa isikimu amandla okusindisa evumela isilawuli ukuze ngokushesha futhi endaweni efanele shaqa amatafula ngesikhathi disconnections okungazelelwe kusuka Samsung 850 inethiwekhi Evo. Umsebenzisi Izibuyekezo ngazwi linye bakholelwa ukuthi inkampani ngamabomu lwalungahileli enjalo into ebalulekile SSD yabo. Kodwa le nkinga ukukhathazeka kuphela Evo umugqa, isikimu iwuhlelo manje futhi ezisebenza ngempumelelo.
I amabhodi ebonakalayo MGX abalawuli eziyisisekelo futhi inkumbulo chips usebenze 40nm. Kukhona ungabona RAM chip, musa ihluke nomunye.
Ngokulandelana ukufunda nokubhala imisebenzi
Ijubane lapho Samsung 850 Evo uchungechunge ofunda, kubangela imizwelo eyakhayo kuphela. Inhlanganisela isistimu ayisishiyagalombili-chip, futhi MGX TLC V-Hand ikuvumela overclock le Sata esibonakalayo kuze kufike ku amakhono abo, ngakho ukusebenza ngesivinini umugqa kungagcini kuphela umthamo kohlelo, kodwa hhayi izithiyo yangaphakathi.
Kepha bhala ezilandelanayo, isimo athe ukuhluka kancane. Kwakucatshangwa ukuthi uhlelo nge block ezinhle, futhi empeleni, efanayo ezilandelanayo ukuqopha Evo iwuhlelo Pro, uthethe okuhle. Nokho, lapho usebenzisa ukulungiswa ivolumu 250 GB futhi imodeli aphansi inama speed eliphezulu ungeme kanye namagugu esondela ukuqopha idrayivu kanzima ushayela 840 chungechunge.
Okungahleliwe imisebenzi wokufundwayo ku ulayini Samsung 850 Evo
Ukubuyekezwa kwe-SSD yesimanje for abathanda eziningi kubalulekile iphuzu elilodwa kuphela - inkomba yokuthi okungahleliwe wokufundwayo isivinini. Ngakolunye uhlangothi, izinga ngephutha operation ukucutshungulwa akugcini esibonakalayo, kanye nezinye - ingxenye enkulu izicelo engenayo esuka yesimanje idrayivu kanzima okungahleliwe. Noma kunjalo, naphezu kwakho konke, ukusebenza ngemoto ezintsha kanzima ayikashintshi kakhulu, futhi umuntu ubengacabanga ukuthi intuthuko kule ngxenye wayeka ngokuphelele. Kodwa umugqa entsha Evo egijima MGX chip wabonisa ukuthi umthamo Sata izinhlelo e onobuhle yamuva ikude sikhathele siyingcuba.
Bench ukuhlolwa luveza ukuthi 850 chungechunge kakhulu ngcono ukusebenza yayo kuqhathaniswa ne imikhawulo yangaphambilini wokufundwayo okungahleliwe isivinini. Lena olubonakalayo izinguqulo ikakhulukazi 500 GB: it nje kuphela alishiye analogue zabanye abakhiqizi, kodwa line yayo amaphesenti 10-15 of.
imodeli Ubuholi kakhulu ngasiphi imibuzo ukujula kungakhathaliseki kulayini, ngaphandle kungaba ukulandelana esiphezulu. Kodwa uma siyiqaphele ukuthi umthwalo ongako kusukela amadeskithophu nhlobo fixed, lingasuswa ngokuthi Samsung 850 umholi Evo namuhla esheshisa ukufunda.
"Samsung" inkampani ehola khona ingxenye yombuso ngemoto okuqinile akuyona nje. I abasebenzi abanamakhono, futhi omkhulu umthamo ukukhiqizwa baye bavumela sha ukudala i imikhiqizo okuthakazelisayo futhi enza izinto ezihlukahlukene, okuyinto abangazazi sihluke kuleso ezihlinzekwa amafemu ukuncintisana. Futhi umbiko lanamuhla kuwubufakazi ukuthi: inhlanganisela uyabaqinisa amamodeli ubudala baye bavumela inkampani ukundlula bonke imigqa zakudala ngamaphutha esedlule bese udala hard drive, lizidlula kude flash ngemoto efanayo, eyakhelwe MLC Hand izinhlelo.
Shayela 850 Evo kufanele kubonakale sengathi ezinhle, kuqhathaniswa okuhlala kanye ngesivinini wangaphandle hard drive ukuthi uyakwazi ancintisane onobuhle oluhlongozwayo kuzo nezinye abakhiqizi.
Inketho premium e ebusweni 850 Pro yakhelwe abantu abadinga i nokwethenjelwa kokuvamile ukusebenza oluvelele, kuyilapho umugqa 850 Evo inikeza ukuthembeka okuhle kanye nokusebenza kakhulu, kodwa Ukonga okukhulu. Ngakho uma ufuna wena i drive sangaphandle uhlelo ezivamile ukuthi akudingi ikhono elikhulu, Samsung 850 Evo - ukukhetha ephelele.
Participial. Futhi ekutholeni Isibonelo